सरकारले दुइतिहाइ दम्भमा लुटतन्त्र मच्चाएको छ: नेता पौडेल - Gandak News
सरकारले दुइतिहाइ दम्भमा लुटतन्त्र मच्चाएको छ: नेता पौडेल
गण्डकन्यूज द्वारा २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:५४ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दुइतिहाईको भरमा सरकारले अदालत र अख्तियारलाई तर्साएर देशमा लुटतन्त्र मच्चाएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानको दोस्रो चरणको कार्यक्रमको पोखरामा मंगलबार उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले अदालतले गरेका फैसलाहरु बाँझिनु भनेको दुइतिहाईकै हस्तक्षेप भएको बताए ।
उनले भने, दुइतिहाई देखाएर अदालतलाई तर्साउने, दुइतिहाइ देखाएर अख्तियारलाई तर्साउने काम भएको । एनसेलबारे अदालतले गरेको निर्णयमा सरकार किन बोल्दैन ? उनले प्रश्न गरे, सरकार किन ठूला माछा समाउन सक्दैन ? एनसेल र वाईडबडीमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार परेको छ । साना माछा समाउँछन् । ठूला शासकलाई कारबाही गर्न सक्दैन । सरकारको काम कारबाहीबाट जनता असन्तुष्टि छन् । यसैले पनि सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको उनले आरोप लगाए ।
उनले भने, सत्तामा पुग्ने बेला सपना बाँडे, तर सपना अनुसारको काम नगरेको हुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । ‘सरकारले सामान्य काम पनि गर्न सक्दैन । देशमा डेंगुको महामारी छ, तर नियन्त्रण गर्ने क्षमता सरकारमा छैन,’ पौडेलले भने । सरकारको काम कारबाहीले संविधानको मर्मलाई आघात पु¥याउने काम भएको समेत उनले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य वृन्दादेवी रानाले जागरण अभियानबाट काँग्रेस एक ढिक्का भएको सन्देश जाने बताइन् । नेपाली काँग्रेसका नेता शुक्रराज शर्माले वीपीको समाजवादले मात्र देशको समृद्ध हुने बताए ।
काँग्रेस नेता एव प्रदेश सांसद बिन्दुकुमार थापाले कम्युनिष्टले सत्ताको दुरुपयोग गरेकै कारण जनता जागरुक भएको दाबी गरे । काँग्रेस क्षेत्र नं २ क्षेत्रीय सभापति माधव बास्तोला मधुले काँग्रेसको उपनिर्वाचन लक्षित गरेर काँग्रेस जागरण अभियानमा जनतामाझ जाने बताए ।
कार्यक्रममा काँग्रेस केन्द्रीय प्रतिनिधि हरिप्रसाद श्रेष्ठ, ध्रव वाग्लेले पार्टी एक ढिक्का बनाउन जागरण अभियालने भूमिका खेल्ने बताए । काँग्रेस कास्की क्षेत्र २ (क) का सभापति विजयराज आचार्य, वडा इकाइ सदस्य मुनाकुमारी बास्तोला, क्षेत्र २ ख का सभापति दीपेन्द्र मर्सानी, क्षेत्रीय सचिव शंकर बास्तोला लगायत बोलेका थिए । यसैबीच, पोखरा ९ स्थित वीपी बाटिकामा नेता पौडेलले वृक्षरोपण गरे । सो अवसरमा विभिन्न जातका करिब डेढ सयभन्दा बढी बिरुवा रोपिएको छ ।यसैबीच, काँग्रेस कास्कीले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पनि जागरण अभियान सुरु गरेको जनाएको छ । योसँगै भोलिदेखि वडा इकाइसम्म जागरण अभियान जारी रहने जिल्ला सदस्य नवीन सिग्देलले जानकारी दिए ।
नियम विपरित नगरपालिका सार्न खोजेपछि तनहुँको भानुमा…
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले पाए बलात्कार…
नेपालले गर्यो अमेरिकालाई ३५ रनमा अलआउट,…
नाट्टा गण्डकीको नेतृत्व लिन झवि अधिकारी…
सीसीटीभीमा देखियो चौधरीले पूर्वसचिव…